Hanainga eny Ivato ary handalo an’i La Réunion aloha, satria izy ireo no handray ny andiany fahasivy hatao amin’ny taona 2015, vao ho any Seychelles ny afon’ny Lalaon’ny Nosy, izay notanantsika teto nandritra ny dimy taona teo ho eo.
Lanonambe makotrokotroka no hokarakarain’ny Komity olympika malagasy (Kom) sy ny minisiteran’ny Fanatanjahantena amin’ny fandefasana azy.
Ireto atleta kalaza fahiny hiarahan’izy ireo miasa amin’ny Amao (fikambanan’ireo atleta niatrika lalao olympika), no hifandimby hitondra izany, miala etsy Mahamasina mankeny Ivato, raha tsy misy fiovana. Io no nambaran’ny filohan’ny Kom, Siteny Randrianasoloniaiko, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataony.
Hitety tanàna maro kosa izany any Seychelles, araka ny fandaharam-potoana nofaritan’ny kaomisera jeneralin’ny lalao, Eric Arnephie, nandritra ny fivorian’ny Komity iraisam-pirenen’ny lalao (CIJ) faramparany tany Mahé.
Isan’ireo tanàna hoteteziny ary hanaovana lanonambe i Mahé, Praslin, La Digue ary Silhouette. Amin’ny 5-14 aogositra ho avy izao no hanaovana ny lalao ao Mahé ary efa tokony hiafarana anio ny fanamafisana ny fandraisana anjara miaraka amin’ny anaran’ireo atleta.